Nke a bụ nnukwu ozi sitere na WordStream na arụmụka nke akwụ ụgwọ na nyocha ọchụchọ. Ọ bụ ezie na ndị na-ere ahịa nwere ike ịrụ ụka maka nke nwere mmetụta karị, ma ọ bụrụ na Google na-aga n'ihu na-ebelata ngalaba nyocha ahịhịa na-enweghị oke arụmụka. Echere m na ọ ga-abụ ụbọchị dị nro n'ịzụ ahịa n'ịntanetị mgbe nnukwu ụlọ ọrụ enweghị ike ịrụ ọrụ siri ike iji zụlite nnukwu ọdịnaya ma nwee nlebara anya kwesịrị ha.
Ọ bụghị n'ezie ajụjụ. "Soro EGO." Google mere mgbanwe ya niile ọ bụghị n'ihi na nsonaazụ ya dị njọ. Ọtụtụ mgbe, ndị mmekọ na-enyekwu ozi - ọ bụ nyocha nwere ike nweta ihe iji tụgharịa. Google mere mgbanwe ndị ahụ n'ihi na ha anaghị enweta ego ọ bụla na SEO. Ya mere, ha gara na saịtị buru ibu / akara ka ha mefu ego na Adwords kama SEO. Ma mgbe ahụ, ha gbalịrị ịnye ndị na-eji Google+ ụgwọ ọrụ ka ha wee nwetakwuo data.
N'ebe ahụ agbachitere, ha ga-adọ aka ná ntị na njikọ "spam" - aka na agbanyeghị ị nwere ike ịme njikọ maka onwe gị - kemgbe 2008. Anyị achọghị ige ntị. Ọ masịrị m na enwere m ngwaahịa na PRWeb tupu oge opupu ihe ubi 2011.
Infographics mara mma ma dị mma. E wezụga nke a mgbe penguin update google akwụ obere ntị organic search. Ụlọ ọrụ SEO na-emetụtakwa nke a. Mgbasa ozi akwụ ụgwọ na-eto eto.
Atụrụ anya na mmelite ọzọ ga-abụ ihu ọma na organic.